निगमले ‘छड्के २’ बनाउने, कस्तो बन्ला असफल फिल्मको सिक्वेल ? « रंग खबर
निगमले ‘छड्के २’ बनाउने, कस्तो बन्ला असफल फिल्मको सिक्वेल ?
रंगखबर, काठमाडौँ – पछिल्लो समय सिक्वेल र सिरिज निर्माण गर्ने फेसन नेपाली फिल्म उद्योगमा मौलाएको छ । चाहे त्यो हिट फिल्मको होस् या फ्लप । सिक्वेलको नाममा फिल्म बनाउदै आधा-आधी प्रचार र बक्सअफिसको लाभ उठाउन अहिले फिल्म मेकरको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।
यस्तै बम्पर इनिसियल गरेर पनि फ्लप भएको फिल्म ‘छड्के’को सिक्वेल निर्माण घोषणा गरिएको छ । निगम श्रेष्ठले अब ‘छड्के २’ बनाउने छन् । यो यस्तो फिल्म हो, जसले प्रदर्शन पुर्व ठुलो हाइप बनायो । फलस्वरुप दुई दिनसम्म हलमा दर्शकको भिड लाग्यो । तर, जब फिल्मको वर्ड अफ माउथ कमजोर आयो, फिल्मलाई साता भर टिक्न हम्मे पर्यो ।
आगामी दशैँ (२०७७)लाई रिलिज तोकिएको फिल्मका लागि अहिलेसम्म कलाकार फाइनल गरिएको छैन । प्रेसमिट मार्फत कलाकार सार्वजनिक गर्ने मूडमा छ, निर्माण पक्ष । नेगेटिभ बुद्ध र रस ताण्डवले निर्माण गर्ने फिल्मको बारेमा पूर्ण जानकारी बाहिरिएको छैन ।
यसको प्रिक्वेलमा गात मल्ल, नम्रता श्रेष्ठ, दयाहाङ राई, रविन तामाङ, विपिन कार्की, अर्पण थापा, कामेश्वर चौरसिया जस्ता लोकप्रिय कलाकारको अभिनय थियो ।
कलाकार पल्पसा डंगोल (चम्सुरी)का दुवै मिर्गौला फेल, सहयोग गर्न अपिल
रंगखबर, काठमाडौँ – दुवै मिर्गौला फेल भएर एक महिनादेखि काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत हास्य कलाकार
अभिनेत्री जेनीको अन्तिम विदाई
रंगखबर, काठमाडौँ: अभिनेत्री जेनी कुँवरले बिहीवार साँझ ९ बजे काठमाडौंको थापागाउँस्थित सनराइज सिटी अपार्टमेन्टको आफ्नै
विकट क्षेत्रका लागि मनिषाले जुटाइन ४१ लाखको अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर्स
रंगखबर, काठमाडौँ – अभिनेत्री मनिषाको कोइरालाको संयोजकत्वमा बेलायतबाट ३३ थान अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर्स नेपाल आइपुगेका छन् ।
‘हाम्रो टिम नेपाल’का सदस्यहरुलाई रिहाई गर्न पल शाहको माग
रंगखबर, काठमाडौँ – अभिनेता पल शाहले ‘हाम्रो टिम नेपाल’का पक्राउ परेका सदस्यहरुलाई रिहाई गर्न माग गरेका
‘ओ माई गड’को सिक्वेलमा अक्षय यथावत, परेशको ठाउँमा पंकज
पोर्न फिल्म बनाउने र बेच्ने गरेको आरोपमा शिल्पा सेट्टीका श्रीमान पक्राउ